काठमाडौंमै पा, इन्छ ६० रूपैयाँमा मासुभात। खाना खाने भन्छन्, “कुन विदेशीले चला एको होटल हो?” (भिडियो सहित) – Ap Nepal
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखीएको छ, पुरा हेर्नुहोस । चितवन,चैत । चितवनको भरतपुरमा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन मेची–महाकाली अभियान सुरु गर्ने भएको छ । धुर्मस–सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण गरिरहेको रंगशालामा आर्थिक समस्या पर्दै गएपछि चैत १० देखिअभियान सुरु गर्न लागिएको हो ।
Prevसाउन १ गतेबाट वृद्धभत्ता बढाउदै प्रधान मन्त्री ओली घोषणा,अब कति पुग्ला त ?
Nextसुन किन्ने सोचेइमा हुनुन्छ ? आज घट्यो सुनको मुल्य ..हेर्नुहोस
बि’वाहपछि अभिनेत्री श्वेताले पति विजयेन्द्रसँग बनाएका टिक-टक भाइर,ल (भिडियो सहित)
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित) (35359)
पिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ? (33125)